पशु विमा सँगै मानिसको दुर्घटना विमा वापत २ लाख भुक्तानी - Radio Roshi
रोशी गाउँपालिका वडा नं. १२ कि अर्जुन कुमारी रायक्षेत्रीले कृषक बिमा अन्तर्गतको रकम पाएकि छिन् । सोहि वडाका कृषक अर्जुन कुमार रायक्षेत्रीको दुर्घटना भइ मृत्यु हुँदा उनले इच्छाएको व्यक्ति अर्जुन कुमारी रायक्षेत्री हुन् । उनलाई विमा वापतको रु २ लाख रकम उपलब्ध गराईएको रोशी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशु शाखा प्रमुख रघुनीशाहले जानकारी दिए ।
पालिकाको अध्यक्ष डि.वि. लामाको समन्वयमा युनाइटेड इन्स्यौरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त रकम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत परशुराम थापाबाट हस्तान्तरण भएको हो । कृषकहरुले पशु विमा गर्दा विमाको प्रिमियममा रु १ सय थप गर्दा रु २ लाखको दुर्घटना विमा समेत हुने भएकोले सोही अनुरुपले कृषकलाई भुक्तानी गरिएको हो ।
बाली तथा पशु विमा गर्दा व्यवसायको जोखिम न्यूनिकरण हुने र दुर्घटना विमा क्षेतिपुर्ति प्राप्त हुँदा कृषकले इच्छाएको व्यक्तिलाई राहत भएको छ । रोशी गाउँपालिका अन्तर्गत पशु विमाबाट धेरै जनाले क्षतिपुर्ति प्राप्त गरे पनि दुर्घटना विमाबाट क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्ने अर्जुन कुमारी पहिलो कृषक भएको शाहले जानकारी दिए ।
पनौतीका दुग्ध किसानलाई अनुदान